लगनशिलता,इमान्दारिता,आर्थिक पार्दर्शिता र ब्यबस्थापन भए सफल भईन्छ । - betanadaily.com
लगनशिलता,इमान्दारिता,आर्थिक पार्दर्शिता र ब्यबस्थापन भए सफल भईन्छ ।
-माधवराज थापा ( युवा उद्योगी तथा समाजसेवी )
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ समय: २:१४:४९
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा मात्र नभएर पुवोत्तर मोरङमा एक सफल युवा उद्यमी तथा समाजसेवीका रुपमा परिचय स्थापित गरेका युवा हुनुहुन्छ माधवराज थापा,सामान्य ब्यापार ब्यबसायबाट करिअर शुरु गर्नुभएका उहाँ अहिले स्थापित ब्यबसायीका रुपमा परिचय बनाइसक्नुभएको छ ।
बि।स २०३८ साल जेठ २६ गते ओखलढुंगामा मातापिता कर्णबहादुर र सिता थापाको कोखबाट जन्मिएर आईए सम्मको अध्यायन गर्नुभएका उहाँले २०५८ सालमा महोत्तरीको बर्दिबासकी रञ्जना बस्नेत सँग बैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभयो । त्यसपछि उहाँको जिवनले टर्निङ पोईन्ट लियो । २०५८ सालदेखि नै बेलबारीमा ब्यबसाय शुरु गर्नुभएका उहाँ यतिबेला सफल ब्यबसायीका रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ ।
ब्यबसाय सँगै समाजसेवा र राजनीतिमा समेत सक्रिय उहाँ दर्जनौ संघसंस्थामा आबद्ध रहनुभएको छ । बेलबारी जेसिजको संस्थापक अध्यक्ष,उद्योग बाणिज्य संघ बेलबारीको सचिब लगायत बेलबारीमा स्थापित दर्जनौ संस्थामा उहाँको आबद्धता रहेको छ । बेलबारी ३ मा स्थापित गुरुकुल पाठशालाको सञ्चालक,सयपत्रि मल्टी प्रपोज कम्पनी,श्रीकृष्ण अस्फाल्ट उद्योग,बेलबारी कृषि फार्म लगायत उद्योग,ब्यबसाय सञ्चालन गरिरहेका थापा नेकपा समर्थित राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको प्रदेश कमिटि सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ । उहाँसँग बेतना दैनिकका लागि गरिएको संवादका सम्पादित अंशहरु –
ब्यबसाय सँगै राजनीति र समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ,कसरी समय मिलाउनुहुन्छ र ?
समयको ब्यबस्थापन गर्न सकिएन भने कुनै पनि लक्षमा पुग्न सकिदैन । तसर्थ सबै काममा सक्रिय भईयो र समय ब्यबस्थापन गर्न सकियो भने नै सफल बन्न सकिन्छ । समय ब्यबस्थापनमा मलाई मेरो जेसिज यात्राले पनि थप मद्दत पुगेको छ ।
पार्टीमा आबद्ध कहिलेदेखि हुनुभयो र के जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
म पार्टीमा २०५२ सालदेखि नै आबद्ध रहेको छु । र हाल नेकपा समर्थित राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको प्रदेश कमिटि सचिवालय सदस्य रहेको छु ।
कुनै नेताको पछि अन्धभक्त भएर लाग्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो हैन,त्यो आरोप मात्र हो । मेरो नेतृत्व मान्ने स्वभाव भएकोले अरुलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ । तरपनि म अन्धभत्त नै भएर लाग्ने ब्यत्ति चाँहि होईन ।
अनि ब्यबसायमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
म ब्यबसायमा २०५८ सालदेखि लागेको हुँ । बेलबारीमा सामान्य ब्यबसायदेखि मेरो यात्रा शुरु भएको हो ।
अहिले भएका तपाईका ब्यबसाय ?
हाल सयपत्री मल्टीप्रपोज कम्पनि प्रा।लि,गुरुकुल पाठ्शाला पाथिभरा वासिङ उद्योग,श्रीकृष्ण अस्फाल्ट उद्योग,बेलबारी कृषि फार्म,लगायत अन्य केही कम्पनीमा समेत आबद्द रहेको छु ।
ब्यबसायमा कसरी होमिनुभयो ?
म २० बर्षको उमेरदेखि ब्यबसायमा प्रवेश गरेको हुँ । मेरो सानैदेखिको ईच्छा नै ब्यापार गर्ने थियो, त्यसैले यहि क्षेत्रमा होमिएँ ।
ब्यबसायमा कसरी सफल भईदोरहेछ ?
लगनशिलता,इमान्दारीता,आर्थिक पार्दर्शिता र सहि ब्यबस्थापन गर्न सकियो भने ब्यबसाय मात्र होईन,सबै क्षेत्रमा सफल भईन्छ ।
समाजसेवामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ,के रहेछ समाजसेवा ?
हरेक मानिसमा मानवियताको आवश्यकता पर्छ । समाजलाई उपलब्धी हुनेगरी आफुसँग हुने मानबियतालाई सेवामा लगाउनु सक्नुनै समाज सेवा हो जस्तो लाग्छ ।
समाजसेवा र राजनीतिमा के फरक छ ?
समाजलाइ लाई उपलब्धी हुनेगरी सेवा गरिने बिषयलाई समाजसेवा भनिन्छ । राजनिति चाँहि स्वार्थ बनेको छ । तर समगमा्र समृद्धि ,विशेष उद्धेश्य प्राप्ति, दिगो परिवर्तनको नितिका लागि लाग्नुलाई राजनीति भनिन्छ ।
तपाई त युवा ब्यत्तित्व,युवाहरुका लागि के गर्दैहुनुहुन्छ ?
युवा अबस्थामा हामप्ले नेतृत्व, ब्यक्तित्व, क्ष्मता बिकास गरी समाज परिबर्तन र समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छु । साथै युवाहरुलाई प्रोत्साहन हुने बिभिन्न गतिबिधिमा संलग्न समेत भईरहेको छु ।
स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनिन्छ,के छ तपाईको राय ?
नीति नबनी स्थानिय तहको संरचना बनेकोले यो पहिलो कार्यकाल नीति बनाउनमा धेरै समय खर्चिनु परेको छ । त्यसैले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको हो । अब त नीति नियमहरु पनि बनी सके । अब स्थानिय तह तथा जनप्रतिनिधीहरु जनअपेक्षा अनुरुप कामहरु तिब्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाब छ । काम गर्न नसकेमा आगामी दिनमा जनताबाट तिरस्कृत भईन्छ ।
आगामी योजना के छन ?
भइरहेका कामको ब्यबस्थापनलाई थप मजबुत बनाउदै सामाजिक सेवामा निरन्तर सक्रिय भएर लागि रहने सोच छ । प्रस्तुति -नरेन्द्र बस्नेत
बेलबारी । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्र्तगत मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) को सभापतिमा केदार अधिकारीले उम्मेदवारी घोष...
ब्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो
ब्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो -झमक जमरकट्टेल (प्रिन्सिपल,आर्दश सेकण्डरी ई.स्कुल बेलबारी ) झमक जमरकट्ट...
बेलबारी बाख्रा काण्डको छानविन गर्न बनेको समिति कहाँ के गर्दैछ ?
बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले जेठ दोस्रो साता किसानहरुलाई अष्ट्रेलियाबाट चार्टर गरी ल्याएर बितरण गरेको भनिएको फुल ब्लड ब...
बेलबारी बाख्रा काण्ड,केही भ्रम र यथार्थ
बेलबारी । मोरङ जिल्लाको पूर्वोत्तर भेगमा रहेको बेलबारी नगरपालिका यतिबेला राष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको शिखरमा छ । राम्रो कुरा...
सत्ता प्राप्तिकै निम्ति आमा बेच्ने काम बन्द होस
(१) सम्पुर्ण राजनैतिक आस्थावान कार्यकर्ता, देशभक्त नागरीक, अग्रज, आउँदो नयाँ पुस्ता र दिग्गज ब्यक्तीत्वहरु प्रती हार्दिक...
समाजसेवा आफ्नो पैसाले गर्ने हो,अरुले दिएको बाँडने होईन ।
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा खेमप्रसाद गौतम कुनै नौलो नाम होईन । दर्जनौ सामाजिक संघसंस्थाको कुशल नेतृत्व गर्दै पछिल्लो समय...